मा एक चिसो, चिसो जाडो दिन, तर अझै पनि पूर्ण मान्छे को छुट्टी मा र एक समूह को फ्रान्सेली हर्न खेलाडी । (को एक भिडियो तिनीहरूलाई पछि ।) यो घर थियो म, र केही मानिसहरू कुरा लियोनार्डो दा भिञ्ची डिजाइन.
सरकारी किताब ट्रेलर लागि फिल प्रणय, पहिलो अनुहार को. के त्यहाँ थिए भने एक शताब्दीअघि-लामो षडयंत्र भनेर सुनिश्चित गर्न भविष्यवाणीहरू साँचो आए. यस्तो समूह जमाउँछ थियो, विश्वास नलाग्दो मा शक्ति को भविष्य आकार.
यो योजना मा काम गर्दछ. अर्को भविष्यवाणी सुरु गर्न बारेमा छ, र त्यहाँ एक मात्र मानिस जो गर्न सक्छन् रोक्न पहिलो अनुहार को. अध्याय को एक दुःखी गर्मी मा बिअरिट्ज बयान, एक क्यानाडा महिला, गर्न आशाहरू उनको जीवन परिवर्तन गर्न बढ बिअरिट्ज. एक विनाशकारी सम्बन्ध संग मानसिक अस्थिर डोमिनिक, त्यो कटिबद्ध छ नयाँ मित्र बनाउन र पाउन सिद्ध. तर यो गर्मी सहारा पटक पटक गरेर जोडे र परिवार, उपलब्ध एकल एक्लो छन्, मान्छे पनि अक्सर द्वारा रोमान्टिक विफलता छ । र यदि जवान कलाकार प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ प्रविष्टि मा स्थानीय समाज, उहाँले रहेको एक छल्ने आंकडा छ । जब गरेको शरीर सतहहरूमा मा ध्यान नयाँ निरन्तर चलिरहनु छ । थियो उहाँले साँच्चै गरिएको एक भाग्य शिकारी, एक र, वा बस एक कोमल, अधिक-संवेदनशील मानिस, मा एक हरुवा प्रेम र मित्रता । प्रहरी निष्कर्ष छ उहाँको मृत्यु भएको थियो, संयोग तर छैन सबै बिन्दु हत्या भएको छ । वा बयान भन्दा-प्रतिक्रिया । सायद एकाकीपनको र अलग गरेका छन्, उनको शंकास्पद लागि, प्रेम छ रूपमा वही मुसीबत रूपमा कहिल्यै, र खतरा देखि पत्र डोमिनिक छन् आइपुगेपछि वृद्धि संग बारम्बार शुरू चाँदी हर्न गूँज: एक गीत को रोलाण्ड. एक उपन्यास द्वारा प्रेरित गीत रोलाण्ड र आधारित पटकथा गीत को रोलाण्ड. जा देखि पुरानो पैसा गर्न कुनै पैसा, तीन मैक्सवेल बहिनीहरूले’ जीवन परिवर्तन गर्न बारेमा हो. अब, एक द्वारा एक, प्रत्येक पर्छ उनको आफ्नै ट्रेल खुसीसाथ-कहिल्यै-पछि । मैक्सवेल सधैं भरपर्दो, कडा-काम एक जबकि उनको कान्छो बहिनीहरूले बाँच्न एक-सूची जीवन को शिष्टाचार, आफ्नो परिवार भाग्य । सम्म यो अचानक हराएको पछि छोडेर, एक ऋण को. अब सामना छ दुई विकल्प: खेल्न सतत उनको खराब भाइबहिनीहरूको, वा अन्तमा बाहिर तोड उनको पूर्वानुमान तालिकामा को बाटो द्वारा फ्रान्स । जब गरेको मालिक गर्मी लागि, छ साँच्चै बस व्यापार मा कफी चल्छ लागि चलिरहेको को सडकमा माध्यम कान सम्म सुन्दर, भाग्य जेभियर उनको बन्द उनको खुट्टा बचत गरेर उनको देखि एक बन्द गिरने. गरेको हिँडिरहेका मा हावा बाहेक त्यो जीवित मा फैशनेबल छाया को पहिलो महोदया, पूर्ण संग लेकानेखुसीगर्छ बारेमा अचानक गुप्त जेभियर गरेको भाग मा उनको लोप. फेरि, जा देखि पुरानो पैसा गर्न कुनै पैसा, तीन मैक्सवेल बहिनीहरूले’ जीवन परिवर्तन गर्न बारेमा हो. अब, एक द्वारा एक, प्रत्येक पर्छ उनको आफ्नै ट्रेल खुसीसाथ-कहिल्यै-पछि । जा देखि पुरानो पैसा गर्न कुनै पैसा, तीन मैक्सवेल बहिनीहरूले’ जीवन परिवर्तन गर्न बारेमा हो. अब, एक द्वारा एक, प्रत्येक पर्छ उनको आफ्नै ट्रेल खुसीसाथ-कहिल्यै-पछि । ‘एक फ्रान्सेली मदत गर्छ भूत को एक संसारमा-प्रसिद्ध पप अनुभूति मा पारित गर्न. प्रख्यात छ भित्र, एक सानो खेती गाउँमा एभेरोन. मदत लागि भूत मा पारित मा. तर, जब त्यो एक दिन अभिवादन गरेर आत्मा को एक हालै मरेको विश्व-प्रसिद्ध पप अनुभूति, उनको संसारमा र आफ्नो मतभेद, सधैंभरि फेरबदल गाउँमा गरेको भाग्य । योजना जबकि छोराछोरीको उत्पादन मा गाउँ गरेको वार्षिक महोत्सव, त्यो मदत गर्छ बासिन्दाहरूलाई जीवित र मृत, संग सर्तहरू गर्न आउन आफ्नै संघर्ष, सबै जबकि आफु पत्ता आध्यात्मिक शक्ति को के मतलब प्रेम र प्रेम छ । यो भिडियो पूर्वावलोकन पुस्तकहरू मा पुरस्कार विजेता सानो मिस इतिहास यात्रा गर्न छोराछोरीको तस्वीर पुस्तक श्रृंखला । यो पनि समावेश छ को न्यूयोर्क शहर साहसिक र एक रंग पुस्तक शामिल बुद्धि को शब्द देखि इतिहास छ । चाची लुसी एक वास्तविक दुखाइ घाँटी मा. हुनत त्यो थिएन ठ्याक्कै एक सेन्ट गर्दा त्यो जीवित थियो, अब त्यो मरेको हो, त्यो आफु बनाउने जीवन दुःखी लागि उनको परिवार । उनको नियमका छ क्रिस्टल स्पष्ट छ: सङ्कलन गर्न उत्तराधिकार, उनको भतीजे र आफ्नो परिवारको सार्न छ उनको घर मा छ, जो निश्चित छैन एक महल. चाची लुसी छ अर्को आश्चर्य अप उनको बाहुला, को एक किसिमको पागल धन शिकार, खुट्टाको जोर्नी-मा गहिरो माटोको. स्वागत गर्न ग्रामीण फ्रान्स । के निश्चित छ कि उनको प्रिय भतीजे छैनन् बारे नरमाइलो लाग्यो प्राप्त गर्न रूपमा तिनीहरूले समातिएको मा एक अविस्मरणीय साहसिक मा हृदय को. कसरी सम्म हुनेछ तिनीहरूले जान प्राप्त गर्न आफ्नो हात मा. हास्यकार परिस्थिति, संवाद र नाटकीय उत्तेजित गर्दछ को घटनाहरू आउन छिटो र, द्वारा करवाया प्रिय चाची लुसी. चरमोत्कर्षलाई सक्छ मात्र हुन आश्चर्यजनक छ । एक भन्दा बढी पेज-टर्नर, यो एक जंगली सवारी । को — कामदेव गरेको तीर एक तेज, आउँदै-को-उमेर महाकाव्य । यदि तपाईं जस्तै जस्तै इतिहास, को दान भूरा कथाहरू, वा साहित्यिक को लेजेन्ड.
दर्शक । तारा ।
पाउन — र आरक्षित को प्रतिलिपि उनको उपन्यास यहाँ: ‘यदि तपाईं सक्षम थिए, कसरी हुनेछ तपाईं नया स्वरूप आफ्नो जीवन । इभान्स एक अझै भावनात्मक संग एक गोप्य छ । जब उनको सिमटन सोध्छन् उनको यो प्रश्न त्यो यो लिन्छ गम्भीर छ । माथि दिने उनको स्थिर घर र काम मा वेल्स, यात्रा एक्लै गर्न एक बिर्सेका कुना को ग्रामीण फ्रान्स सुरु गर्न एक नयाँ जीवन मा एक उधारो कुटीर । त्यहाँ उनले भेट्छन् एक मूर्तिकार संग एक नग्न मा काम. आफ्नो अनौठो मुठभेडों प्रोत्साहन स्वीकार गर्न एक सत्य त्यो वेवास्ता छ वर्ष को लागि? र के-के हुन् नतिजा भने त्यो गर्छ ।
← कसरी संग प्राप्त यो केटी छ । याहू जवाफ
एक वेब च्याट संग बालिका →